Diki organic manyowa ekugadzira mutsara. - YiZheng Heavy Machinery Co., Ltd.
Yedu diki yemanyowa yekugadzira fetereza inokupa iwe nhungamiro pane yakasikwa manyowa yekugadzira tekinoroji, tekinoroji uye kumisikidza.
Kune varimi vefotereza kana varimi, kana iwe uine ruzivo rwushoma nezve organic fetiraiza kugadzirwa uye usina mutengi sosi, unogona kutanga kubva kune diki organic fetiraiza yekugadzira mutsara.
Mumakore achangopfuura, nyika yakagadzira uye ikapa nhevedzano yemitemo yekusimudzira kusimudzira indasitiri yemanyowa. Izvo zvakanyanya kudiwa kwechikafu chemanyowani, zvakanyanya kudiwa zviripo. Kuwedzera kuiswa kwe organic fetiraiza hakugone chete kudzora mashandisirwo emakemikari manyowa, asi zvakare kunatsiridza mhando yezvirimwa uye kukwikwidza pamusika, uye yakakosha pakudzivirira nekudzora kwekurima kusinganetsi sosi sosi sosi uye kusimudzira kwekurima kupihwa- divi rechimiro shanduko. Panguva ino, mabhizinesi e aquaculture anga ave maitiro ekugadzira mafotereza emanyowa, kwete kungoda marongero ezvekuchengetedza nharaunda, asi zvakare kutsvaga mitsva mitsva yekuwana budiriro yakagadzikana mune ramangwana.
Iko kugona kwekugadzira kwe diki organic manyowa ekugadzira mitsara inosiyana kubva ku500 kilograms kusvika 1 tani paawa.
Inowanikwa mbishi zvigadzirwa zve organic fetiraiza kugadzirwa
1. Double-akabatana chisanganiso
Iyo miviri-axis chisanganisi inoshandisa hupfu zvigadzirwa senge yakaoma dota uye inomutswa nemvura kunyatso nyorovera yakaoma yakaoma madota zvinhu, kuitira kuti humidified zvinhu zvimuke zvisina kuoma madota uye zvisingasvinure kunze kwemvura madonhwe, kuitira kufambisa kutakurwa kwe nyoro nyoro kurodha kana kuendesa kune imwe irikupa michina.
2. A new organic organic fetiraiza granulator
Iyo nyowani organic fetiraiza granulator inoshandiswa kune granulation yehuku yehuku, mupfudze wenguruve, ndove yemombe, nhema kabhoni, ivhu, kaolin uye zvimwe zvimedu. Iyo organic yezvinhu zvefetiraiza zvinosvika 100%. The PARTICIPLE saizi uye zvakafanana zvinogona kugadziridzwa maererano ataure ataure.
Saizi LW - yakakwira (mm)
Iyo roller dryer inoshandiswa kuomesa iyo yakaumbwa fetiraiza zvikamu. Yemukati yekusimudza ndiro inoenderera ichisimudza uye ichikanda iyo yekuumba zvimedu, kuitira kuti izvo zvinhu zvive zvizere kusangana nemhepo inopisa kuzadzisa chinangwa cheyunifomu kuomesa.
Rakaumbwa saizi (mm)
Dzokai kumhanya (R / Maminitsi)
4. Roller inotonhorera
Roller inotonhorera muchina muhombe unotonhora uye unopisa pasi zvakaumbwa fetiraiza zvimedu mushure mekuomesa. Ipo ichidzikisa tembiricha yeakaumbika mafotireza, izvo zvemvura zvinoderedzwa. Iwo muchina muhombe wekuwedzera simba reyakaumbwa fetiraiza zvikamu.
5. Literiform ubvise chigayo
Yehunyambiri cheni crusher inotora yakakwira-simba amadium-isingagadziriswe carbide cheni ine synchronous kumhanya mukukuya maitiro, ayo akakodzera kukuya kwefetiraiza kugadzirwa mbishi zvinhu uye ma refuel.
Kunonyanyisa PARTICIPLE saizi chikafu (mm)
Mushure kupwanya zvinhu PARTICIPLE saizi (mm)
Simba remagetsi （kw）
Kubudirira kugona （t / h）
6. Roller nesefa
Iyo nesefa yemuchina wekutetepa sieve unoshandiswa kupatsanura yakajairwa mafetiraiza uye zvidimbu zvisina kukwana zvefetireza.
7. otomatiki kavha muchina
Shandisa otomatiki fetiraiza yekumachina michina kuputira organic fetiraiza zvikamu nezvikamu zviviri kusvika makumi mashanu emakirogiramu pasaga.
Mhepo sosi yekushandisa （m3 / h）
Mhepo sosi kumanikidza, MPa）
Kavhara nhanho bhegi / mita